Better Tomorrow: ဆင်းသူဆင်းလို့ တက်သူတက်
ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ဘ၀မှာအားလပ်ရက်ဆိုတာ နည်းပါးလှပါတယ်။ ဒီနေ့လည်း တီဘီလူနာတစ်ယောက် ကျန်းမာရေး အခြေအနေပြန်လည် ဆိုးရွားလာတာကြောင့် ဆေးရုံကို အရေးပေါ်ပို့ပေးခဲ့ရပါတယ်။ အပြန်မှာ ဆေးရုံမှာ ရက်လေးဆယ်ကျော်နေတဲ့ အေအိုင်ဒီအက်စ် ရောဂါသည် ညီငယ်လေးတစ်ယောက်ကို ဆေးရုံက ဆင်းခိုင်းနေတာကြောင့် ပြန်ကြိုလာခဲ့ပါတယ်။ ယာယီခိုလှုံသူများနေထိုင်ရာတန်းလျားမှာ အခန်းစီစဉ်ပေးရ ပါတယ်။ အင်း..... အသစ်ထပ်တိုးလာတဲ့ဝေဒနာရှင် တစ်ယောက်ပေါ့။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မြန်မာရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားများဟာ ဆေးအရှိန်ဒဏ်ကို မခံနိုင်လို့ ကိုယ့်ဖါသာ ဆုံးဖြတ်ပြီး ရပ်ပစ်လိုက်တာတွေရှိပါတယ်။ ဒါကိုအတူနေသူ များကလည်း လိုက်လျောတတ်ကြပါတယ်။ ဆေးယဉ်ပါးတဲ့ တီဘီပိုး ကူးစက်ပြန့်နှံ့ရတဲ့အကြောင်းအရင်းတစ်ချက်လည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထက်ပိုဆိုးတာက သေသေချာချာ တတ်ကျွမ်းခြင်းမရှိသူများနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ဆေးမှီးတိုတွေနဲ့ ရမ်းကုသတတ်ပြန်ပါသေးတယ်။ လည်ပင်းမှာ ထွက်လာတဲ့ တီဘီအကြိတ်တွေကိုလည်း ပြည်ရှိတယ်ဆိုပြီး သန့်ရှင်းမှုမရှိတဲ့ အခန်းမှာပဲ ခွဲထုတ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့တွေ့တော့ လည်ပင်းတစ်ခုလုံးနည်းပါး ပြည်တွေတည်နေပြီး လူနာလည်းပဲ လမ်းတောင် ကောင်းကောင်းမလျှောက်နိုင်တော့တာကြောင့် နယ်စည်းမခြားဆရာဝန်များအဖွဲ့ကိုဆေးဝါးကုန်ကြ စားရိတ် အကူအညီတောင်းပြီး ဆေးရုံကိုတင်ပို့ပေးခဲ့ရပါတယ်။
အေအိုင်ဒီအက်စ် လူနာညီလေးကိုကြည့်တော့လည်း အသက်က ၂၅ လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။ ဘယ် အသက်အရွယ်လောက် ကတည်းက သူရောဂါပိုးကူးစက်ခြင်းကိုခံထားရသလဲဆိုတာ မခန့်မှန်းတတ် သလောက် ပါပဲ။ ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ နယ်စပ်ခြင်းနီးကပ်တဲ့ နယ်မြေကလူတွေက အရွယ်မတိုင်မှီကလေးဘ၀ကတည်းက ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှာ အလုပ်လာလုပ်နေကြပါပြီ။ တရားမ၀င်ကလေးအလုပ်သမားနှုန်း တွေမြင့်တက်နေတာဟာ အိပ်အိုင်ဗွီ၊ အေအိုင်ဒီအက် ကူးစက်နှုန်းပြန့်ပွါးမှုနဲ့ စပ်စပ်နေတယ်ဆိုတာ အတွေ့အကြုံအရပြောရဲပါတယ်။ အနာဂတ် အရေးကို စိတ်လေးမိပါတယ်။ ပထမအကြိမ်သွေးစစ်ချက်အဖြေအရ ဇနီးသည်မှာ တော့မတွေ့သေး ပါဘူး။ နောက်သုံးလ သို့ ခြောက်လ တစ်ကြိမ်ပြန်စစ်လျှင်တော့ မတွေ့ပါစေနဲ့လို့ပဲ ဆုတောင်းပေးရတော့မှာပေါ့။
Posted by အောင်ကြည်မင်း at 2:31 AM
သံဝေဂရစရာ ပို့စ်လေးပါ. ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအတွက် ရောဂါသည်တွေ ကိုစောင့်ရှောက်ရတာ အရမ်းမွန်မြတ်ပြီး ကုသိုလ်ရတဲ့အလုပ်ပါ.
ကျနော်တို့မြန်မာတွေ ဒီဘ၀က အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်အောင်